Beginners များအတွက် binary Options ကို | စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing - Binary Options ကိုဘာတွေလဲ
မကြာသေးမီကာလ၌, ငါတို့ binary options များ ပို. ပို. စည်းကမ်းချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြားနာပြီ။ binary options များမျိုးစုံကမ္ဘာ့စျေးကွက်အတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းကိုပေး။
အန္တရာယ်များနှင့် binary ကုန်သွယ်သည့်အားသာချက်များ။ ဤအလမ်းညွှန်များအတွက်, ငါတို့ binary အဘယ်အရာကို options နဲ့သင်ကုန်သွယ်စတင်ရန်ရှာကြသည်ဆိုပါကသိရန်လိုအပ်ပါသောအရာကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
binary options များထူးခြားဆန်းပြား options များထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်သော်လည်း, သူတို့သည်နားလညျပွီးအသုံးပွုဖို့တကယ်ကိုရိုးရှင်းဖြစ်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာအရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်သောလူကြိုက်အများဆုံး option ကိုကို "High-အနိမ့်" ဖြစ်ပါတယ် ?? option ကို။ ထို့အပြင် "fixed-ပြန်လာ" ဟုခေါ် ?? option ကိုကသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ / အချိန်တစ်ခုသို့မဟုတ် "သပိတ်စျေးနှုန်း" ရှိပါတယ် ?? ။
/ အချိန်အဆိုပါသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲသင်အသုံးပြုနေတဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရှိသည် options များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒီမှာအားသာချက်ကတော့ကုန်သည်သူတို့ကဆုလာဘ်များနှင့်အန္တရာယ်များကိုကြိုတင်သိရှိထားကြတဲ့အဓိပ္ပာယ်, ဘာပဲရလဒ်ကိုအနိုင်ရသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးသွားကြသည်ဘယ်လောက်သိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သို့သျောလညျးစိတျထဲမှာသိုထားသင့်ကြောင်းဦးတည်းအရာအကျိုးကိုအမြဲတမ်းအန္တရာယ်ထက်နိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဤလုပ်ငန်းသနည်း ရဲ့ထိုပြည်၌သင်တို့သည်တခုတခုအပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်နေပါတယ်အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် X တို့မှာပိုင်ဆိုင်မှု X ကို $ X ကိုတစ်ဦးကလက်ရှိတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်ဟုခေါ်သည်ဆိုပါစို့။ အဆိုပါသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်2ရက်ပေါင်း၌တည်ရှိ၏။ သင်က high-အနိမ့် option ကိုရွေးချယ်ရာတွင်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုသွားမယ့်အရာဦးတည်ချက်ခန့်မှန်းဖို့ထင်နေကြသည်။
"အမြင့်" ?? "အနိမ့်" စဉ်ကမြှင့်မည်ဟုဆိုလိုသည် ?? ကဆင်းသွားကြောင်းဆိုလိုသည်။ သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှန်ကန်လျှင်, သင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြန်လာပေးဆောင်ခံရဖို့သွားကြသည်, သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမမှန်ကန်လျှင်, သင်ကိုဖန်ဆင်းတစ်ခုလုံးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးသွားရသည်။
နောက်ထပ် binary option ကိုကို "ဖုန်းခေါ်ထား" ဖြစ်ပါတယ် ?? option ကို။ တစ်ဦးကကုန်သည်တစ်ဦး "ခေါ်ဆိုခ" ဝယ်ယူရန်သင့်တယ် ?? သူတို့ကစျေးကွက်မြင့်တက်လာကြောင်းယုံကြည်ဒငျ, , အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုန်သည်စျေးကွက်ကျဆင်းကြောင်းယုံကြည်သည်ဆိုပါကသူတို့တစ်တွေ "ထား" ဝယ်ယူရန်သင့်တယ် ?? ။ စျေးကွက်ကျဆင်းသို့မဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်ရဲ့အဆုံးမှာမြင့်တက်လျှင်ကဆုံးဖြတ်ထားနိုင်သည့်နေဖြင့်ပေးထားသောသပိတ်စျေးနှုန်းရှိပါသည်။
a "ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု" အတွက် ?? အချိန်ကိုကုန်ဆုံးသည့်အခါအောင်မြင်မှုရရန်, စျေးနှုန်းသပိတ်စျေးနှုန်းအထက်ဖြစ်ရပါမည်။ တစ်ဦး "ထား" အတွက်, ထိုရန်ဆန့်ကျင်ဘက် ?? အောင်မြင်မှုရရန်, စျေးနှုန်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်တွင်သပိတ်စျေးနှုန်းကိုအောက်တွင်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။
အဆိုပါသပိတ်စျေးနှုန်းအတူတကွသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ / အချိန်, ပေးချေမှုနှင့်အန္တရာယ်နှင့်တကွ, ကုန်သည်ရဲ့အစကတည်းကပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အများစုကပွဲစားများဥပမာငွေကြေးအားလုံးသို့မဟုတ် S & P 500 အညွှန်းကိန်းကဲ့သို့, သပိတ်စျေးနှုန်းအဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်များ၏လက်ရှိနှုန်းထားများယူပါ။
ပေးထားသောအချိန်ကစျေးနှုန်းလက်ရှိစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်တက်သို့မဟုတ်ကျလိမ့်မည်ဆိုပါကဒါရိုးရှင်းတဲ့စကားကြောင့်ထားရန်, သင် wagering နေကြသည်။
နောက်ထပ် binary option ကိုက "အကွာအဝေး" ဖြစ်ပါတယ် ?? option ကို။ အဆိုပါ "အကွာအဝေး" ?? option ကိုကုန်သည်များကစျေးနှုန်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်တွင်အတွက်ဖြစ်သွားသောအကွာအဝေးကိုသတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ စျေးနှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းပါလျှင်ရှင်းနေသည်မှာ, ထို့နောက်ကအနိုင်ရရှိအခြေအနေ; မဟုတ်ရင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။
"One Touch" ?? သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့်သေးသောအခြား binary option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကအခြို့သောပိုင်ဆိုင်မှုအောင်မြင်မှုရရန်ကုန်သွယ်မှုများအတွက်နိုင်ရန်အတွက်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ပေးထားသောကာလ၌အချို့သောစျေးနှုန်း hit ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။
ထို့အပြင်အချို့သောပွဲစားသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်ကိုသတ်မှတ်ကြကုန်အံ့။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းယခုအချိန်အထိသတိပြုမိကြသကဲ့သို့, သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ / အချိန်သင်ငွေရှာသို့မဟုတ်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သော့ကိုအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။
တချို့ကပွဲစားများ 60 စက္ကန့်ကဲ့သို့အနိမ့်ဖြစ်နိုင်သည့်, သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်ကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းက၎င်း၏ဖောက်သည်ပူဇော်ပေမယ့်အရာကိုလည်းလပေါင်းများစွာသကဲ့သို့ရှည်လျားစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်တို့နှင့်အတူရှိရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှကြွလာသောအခါသင်ရွေးချယ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်ပလက်ဖောင်းပေါ် မူတည်. သင်ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါလိမ့်မယ်။ : အများအားဖြင့်, ပွဲစားကဲ့သို့သောပူဇော်
Indicator: ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei, Nasdaq, Dow Jones, etc
ငွေကြေးစွမ်း: အမေရိကန်ဒေါ်လာ / EUR, EUR / GBP, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / AUD စသည်တို့ကို
စတော့ရှယ်ယာများ: စသည်တို့ကို Google, Facebook, ကိုကာကိုလာ,
ကုန်စည်: ရွှေ, ငွေ, ကော်ဖီ, ရေနံ, etc
စျေးကွက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များကိုပူဇော်သူအများအပြားပွဲစားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများဆုံးအဘို့, လစာထဲကအများနှင့်စွန့်စားမှု fixed နေကြသည်။ ပွဲစားဆုံးရှုံးအရောင်းအများ၏ပိုက်ဆံစုဆောင်းအသုံးပြုပုံနှင့်အရောင်းအအနိုင်ရတဲ့အပေါ်ရာခိုင်နှုန်းကွာဟမှုစုဆောင်းခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေ။
binary options များခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကနားလည်ရန်ရိုးရှင်းပြီးသုံးစွဲဖို့ပင်ရိုးရှင်းတဲ့ပါ၏ သို့သော်တဦးတည်းကအမြဲပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်များရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသတိရရမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျထိုလယ်၌သင်တို့၏ပွဲဦးထွက်မချခင် binary ကုန်သွယ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သေချာပါစေ, နှင့် binary ပွဲစားများပူဇော်ရသောဗီဒီယိုလဲ tutorial အချို့ကိုထုတ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။
Tags: အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အကောင်းဆုံး binary options များအကျိုးဆောင်, အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အကောင်းဆုံး binary options များပွဲစားများ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အကောင်းဆုံး binary options များနည်းဗျူဟာ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အကောင်းဆုံး binary options များကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များလမ်းညွှန်, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များအချက်ပြမှုများ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များမဟာဗျူဟာများ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များနည်းဗျူဟာ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များကုန်သွယ်, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ဘယ်လို, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များရောင်းဝယ်ဖောက်, အရင်ကဆိုရင်များအတွက် binary options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်